EWAMT-Yemen: Vita ny atrikasa voalohany tamin’ny famahanana bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2018 19:58 GMT
Efa nampahafantarina antsika ny tetikasan'i Ghaida'a Al Absi ‘Fanohanana ireo Vehivavy Mpikatroka amin'ny Teknikan'ny Media’ izay nampiofana ireo vehivavy maromaro mpikatroka ao Yemen ary niaraha-niasa tamin'ny hetsika Hand In Hand . Izy io dia iray amin'ireo nahazo vatsy fanohanana avy amin'ny Rising Voices.
Sarotra ny nahita toerana mety. Saingy nahitana toerana azo antoka ny tetikasa, efitra iray tao amin'ny FTMF antsoina hoe “All Girls Association“. Hoy i Ghaida'a hoe:
Nitatitra i Ghaida'a hoe :
3- Fitarihandalana amin'ny tambajotra sosialy sy fanokafan'ny mpiofana kaonty Facebook sy niditra mpikambana tao amin'ny vondrona Tetikasa EWAMT tao amin'ny Facebook .
Ireto misy sary maro hafa tamin'ny atrikasa :
Ary naneho ny fihetsem-pony izy:
Ato amin'ity lahatsary ity dia naneho ny heviny tamin'ny teny Arabo ireo vehivavy Yemenita mpikatroka:
[Sary nampindramin'ny EWAMT photo stream]